dhiri: chengetedza $ 240 kana iwe ukatenga iyo moto z ine hasselblad yechokwadi zoom kamera mod bundle
Kuru Nhau & Ongororo Deal: Sevha $ 240 kana iwe ukatenga iyo Moto Z neHasselblad Yechokwadi Zoom kamera mod bundle
Deal: Sevha $ 240 kana iwe ukatenga iyo Moto Z neHasselblad Yechokwadi Zoom kamera mod bundle
Imwe yeMotorola & apos; s (ikozvino Lenovo) mafoni anonyanya kukosheswa akatangwa gore rapfuura, iyo Moto Z, iri kutengeswa zvakare kuAmazon. Chigadzirwa chakavhura indasitiri nyowani yekushandisa yakakwira-yekupedzisira Moto-yakashambadza mafoni, Moto Z inowanikwa nemutengo wakadzikiswa pamwe neimwe yeanonyanyozivikanwa mods, iyo Hasselblad Yechokwadi Zoom kamera.
Kazhinji, Amazon ine Moto Z yakanyorwa pamadhora mazana mashanu, nepo kamera mod inodhura $ 240. Nekudaro, iyo bundle yaunogona kutenga izvozvi kubva kumutengesi weUS inodhura chete $ 500. Chaizvoizvo, iwe & apos; uchave uchiwana iyo Hasselblad Yechokwadi Zoom kamera mod mahara kana iwe ukatenga iyo Moto Z.
Iyo smartphone inouya isina kuvhurwa, zvinoreva kuti ichashanda pamatanho eAT & T uye T-Mobile, asi haizoenderane nevatakuri veCDMA seSprint neVerizon. Zvakare, Amazon inosanganisira iyo Lunar Grey vhezheni yeiyo Moto Z muhomwe.
Izvo & apos; s zvakare inofanirwa kucherechedzwa kuti iyo Hasselblad Yechokwadi zoom kamera mod inowirirana zvizere nemamwe mafoni-anozivikanwa eMoto senge Moto Z Droid, Moto Z Force Droid, uye Moto Z Tamba Droid.
Hapana izwi pamusoro pekuti kupi kwekusimudzira kuchapera, asi Amazon inokanda mukutakura kwemahara uye US warandi kutapira chibvumirano ichi kumberi. Chero zvazvingaitika, izvi zvinoita senge yakanaka chibvumirano kune avo vanofarira kutora mifananidzo yakawanda vachiri munzira, don & apos; iwe haufunge?
Tenga iyo Moto Z + Hasselblad Yechokwadi Zoom mod bundle paAmazon
apple wachi tarisa 3 runyerekupe
Fitbit & apos; s inogona kuve Apple Watch 'mhondi' inodonhedza kunze kweiyo Versa 3 uye Kufuridzira 2
Yakanakisa Nhema Chishanu laptop madhiri anowanikwa izvozvi
iPhone SE (2020) vs iPhone 8: misiyano
Maitiro ekupfura Night mode Portrait neiyo iPhone 12 Pro / Max
Ndeapi maApple uye iPad mamodheru anowana iOS 8? Apple inotumira iOS 8 kuburitsa ruzivo